Dhaq dhaqaaqyo ciidan iyo xiisado dagaal oo laga soo sheegayo Gobolka Gedo – SBC
Dhaq dhaqaaqyo ciidan iyo xiisado dagaal oo laga soo sheegayo Gobolka Gedo
Sida ay ku waramayaan wararka naga soo gaaraya gobolka Gedo waxaa laga dareemayaan deegaano ka hoostaga magaalada Baardheere xiisado dagaal oo halkaasi ay ka wadaan labada dhinac ee isku haya sida Ciidamada DKMG ah iyo xarakada Alshabaab.
Ilo rayid ah oo halkaasi ku sugan ayaa xaqiijiyay in dhaq dhaqaaqyo ciidan iyo isku hub urursi ay xarakada Alshabaab ka wado deegaano ka mid ah gobolka siiba deegaanada hoosyimaada magaalada Baardheere sida Buusaar oo ay maalin ka hor kala wareegeen ciidamada DKMG ah oo iyagu halkaasi isaga baxay.
waxaa la sheegay in iyana dhinaca kale ay wadaan ciidamada DKMG ah dhaq dhaqaaqyada ciidan iyo isku hub urursiga in kastoo aan weli la xaqiijin sababaha ay ciidamada DKMG ah uga bexeen deegaano ka mid ah gobolka oo ay horay ula wareegeen .
Dadka ayaa arimahaasi ka muujiyay cabasho iyo cabsi xoogan iyagoona ka baqanaya in markale ay deegaanadaasi ka qarxaan dagaalo ay labada dhinac isaga horyimaadaan.
Sikastaba ha ahaatee dhaq dhaqaaqyadan ciidan ayaa imanaya xili ay jireen warar sheegayay in ciidamada dowlada ay uga bexeen deegaanada gobolkaas arimo gadood ah ka dib markii ay waayeen mudo bilo ah Mushaaraadkoodii, balse hadal ka soo yeeray wasiirka Gaashaandhiga DKMG ah ayaa ahaa in ciidamada ay u diyaarsanyihiin Mushaaraadkii ay xaqa u lahaayeen.